Nagu saabsan - Huajian Aluminium Group Co. Ltd.
Taxanaha Aluminium Warshadaha
Daahyada Taxanaha Aluminium Daaha
Daaqadda & albaabka Taxanaha Aluminium
Daaqadda & Albaabka Nidaamka EOSS
Kooxda Aluminium ee loo yaqaan 'Huajian Aluminium Group' waxaa laga helaa 2000 magaalada Linqu City, ee gobolka Shandong. Ujeedada kooxda Huajian waa inay noqoto soosaaraha ugu fiican ee alaabada aluminium. Ilaa hadda, shirkaddu waxay leedahay wadarta 5 warshadood iyo 10'000 shaqaale ah. Awoodda sanadlaha ah ee soo saarista Aluminiumku waa 700'000 tan. Marka la eego shahaadooyinkayaga tayada leh, waxaan haysannaa ISO9001, ISO14001, Quolicoat, iyo shahaadooyinka CE iwm. Suuqa dhismaha ee Shiinaha, Huajian Aluminium waa nooca ugu caansan uguna soo dhawaynta badan.
Shirkaddu waxay ku guuleysatay daahkii dhismaha ugu sarreeyay aluminium ee aluminium. Dhismaha magaciisu waa CITIC Tower, wuxuuna leeyahay 108 dabaq, dhererkiisuna yahay 528 mitir. Meel u dhow CITIC Tower, aluminium Huajian wuxuu sidoo kale keenay aluminium aluminium gurigii CCTV, garoonka qaranka ee Shiinaha (buulka shimbirta, kubeelka biyaha). Huajian aluminium wuxuu gaadhay kumanaan mashruuc sanadihii la soo dhaafay, shirkaddana waxaa lagu sharfay inay tahay processor-ka ugu fiican aluminium ee ay soo saaraan Shirkadda Shiinaha ee Shiinaha.
U dabaal degaya Dhismaha Xafiiska Cusub ee Huajia ...
Ogeysiiska Fasaxa Guga
Maxay yihiin faa'iidooyinka casriga ee windo ...
Telefoonka: 0536 335 666
Cinwaanka: No.5188 Donghuan Road, Linqu County, Gobolka Shandong, Shiinaha
Qalabka Aluminium ee loogu talagalay Windows, Naqshadeynta Daaqada Aluminium, Albaabka Aluminium iyo Daaqad, Daaqada Aluminium ee Daaqada Iyo Albaabka, Aluminium Arched Windows, Qaabka Daaqada Aluminium,